Wasiirka a xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Oo Booqasho Ku Jooga Dalka Ingiriska, Ka Waramay Safarkooda | Dhaymoole News
Wasiirka a xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Oo Booqasho Ku Jooga Dalka Ingiriska, Ka Waramay Safarkooda
Hargaysa (Dhaymoole):- Wasiirka wasaaradda xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Maxamed Sheekh Aadan Cilmi, ayaa ka war bixiyay socdaal shaqo oo uu ku joogo dalka Ingiriska, isaga iyo wefti uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka qaranka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici).
Wasiir Maxamed Xaaji Aadan waxa uu sheegay in ay kulamo kala duwan la yeesheen madax kala duwan oo ka tirsan gobolada dalka Ingiriiska iyo shir guddoonka baarlamaanada dalkaas.
Waxa kale oo uu intaa raaciyay in qaddiyadda Somaliland ay tahay mid dalka Ingiriisku uu ka dheregsan yahay oo uu ogyahay in Somaliland xornimadeeda ay ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska. Isla markaana aanay jirin wax midaw ah oo ay Somaliland iyo Soomaaliya wada galeen oo sharci ahaa oo ku adkayn kara in Somaliland ay aqoonsi ku waydo.
Waxaanu intaa raaciyay in qaddiyadda ictiraafka Somaliland tahay mid ay si wayn uga hawl gelayaan ka xukuumad ahaan, isla markaana u qabanayaan looyaro caalami ah oo u dooda madax bannaanida Somaliland, isla markaana xambaara oo goleyaasha baarlamaanada Yurub iyo dawladaha si xaqiiqo ah u hor dhiga dood adag.
Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in masiirka ummadda Somaliland uu ka wayn yahay wax koox yari ay iska afduuban karto oo siday doonto ka yeeli karto.
Wasiirku waxa kale oo uu ka hadlay shir aad u wayn oo ay u qabteen guud ahaan jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalalka Yurub oo isugu yimi shir ka qabsoomay London oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibedda gaar ahaan safiirka Somaliland u joogta dalka Ingiriiska Danjire Ayaan Maxamuud Cashuur, kulankaas oo jaaliyadda reer Somaliland ee dalalka Yurub ay wakiillo miisaan leh u soo dirteen.
Waxaa kale oo uu ka hadlay kulan muhiim ah oo ay kula kulmayaan guddiyada arrimaha dibedda ee labada baarlamaan ee Ingiriisa oo loo ballan san yahay shanta bishan oo lagaga hadli doono qaddiyadda Somaliland.
Waxaanu sidaa ku sheegay wasiir Maxamed Xaaji Aadan waraysi gaar ah oo uu khadka Taleefanka ku siiyay wargayska Dawan isagoo ku sugan magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska.
Ugu horrayn wasiirka oo ka hadlaya sida ay qadiyadda Somaliland tahay ee ay uga duwan tahay sida Soomaaliya ku doodo in Somaliland la midawday,ayaa yidhi. “horta qadiyadda Somaliland way ka duwan tahay sida ay Soomaaliya sheegato ee ah in la midoobay taasoo ah wax xaqiiqada ka fog oo aan jirin manay dhicin meel dadka reer Somaliland markii ay xorriyadda qaateen ee ay dawladnimadooda ka qaateen boqortooyadii Ingiriiska meel umadda reer Somaliland wax lagu waydiiyay oo ay ku raaceen ama ku doorteen in ay Soomaaliya la midoobaan. Markii Somaliland boqortooyada Ingiriisku siisay xornimada ee loogu dhawaaqay waxay Somaliland yeelatay dawlad kooban oo ah 4 wasiir iyo 33 xildhibaan, tiradaa yare e wasiirada iyo xildhibaanada ah oo ah sahqsiyaad kooban,ayaa Xamar tegay oo dawlad Soomaaliya dhisatay uun isku dhex tuuray,laakiin may jirin meel dadka reer Somaliland afti lagaga qaaday oo lagu waydiiyay in ay Soomaaliya la midoobayaan iyo in kale markaa is raac wax la yidhaahdo oo dhacay oo sharci ahi ma jiro 60-illaa 91 ayay sharci darro iyo xaaraan Soomaaliya ku haysatay Somaliland taana waxaa soo afmeeray halgankii dadka reer Somaliland xorriyadooda ku soo ceshanayeen oo ka soo bilaabmay inqilaabkii 1961-dii.. sidaa darteed qadiyadda Somaliland waxaanu u qabanaynaa looyarro caalami ah oo ka dooda oo dhugmantiyada la hayo ee ingiriiskii aynu xornimada kaga qaadanay caalamka baarlamaanadooda kaga dooda illayn ma jiro wax dhugmati ah oo kaa ka dambeeyay oo Somaliland cid kula midawday iyo mid ay Soomaaliya gashay midna e,imikaba afar wasiir way la joogaan hadday Soomaaliya dal u hayaanna way u geyn lahaayeen e,markaa hawshaa waanu wadnaa wixii ay qoraalo iyo caddaymo u baahnaydna waanu wadnaa.”
Wasiirka oo ka hadlayay shir weyn oo ay la yeesheen jaaliyadda reer Somaliland ee Yurub oo lagu qabtay magaalada London ee dalka Ingiriiska oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibedda gaar ahaan safiirka Somaliland u jooga dalka ingiriiska oo jaaliyadaha Somaliland ee Yurub wakiilo u soo dirteen,ayaa yidhi. “London waxaanu ku qabanay shir weyn oo la isku arkay oo ay ka soo qayn galeen dhammaan laaliyadaha Yurub ee Somaliland oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibedda Somaliland gaar ahaan Denjiraha Somaliland u joogta dalka Ingiriiska Ayaan,waxaanan jaaliyadda kala hadalnay sadex qodob oo muhiim ah oo kala ah 1. In ay midnimadooda Somalilandnimadooda iyo isku duubnaantooda in ay illaaliyaan oo ay ka gudbaan qabyaaladda iyo kala xuluufaysiga isla markaana reer Somaliland ay ahaato waxa mideeya.2 in ay dalalka ay joogaan ay ka muuqdaan oo ay wax ka noqdaan iyo ta sadexaad oo ah in ay dalkoodii wax gasahdaan oo ay aqoon iyo maalgashiba ku soo celiyaan oo aanay qurbaha isku illaawin.sadexdaa qodobna aad ayay usoo dhaweeyeen waxaakale oo aanu ga waranay halka dalku marayo iyo sida asxaab iyo xukuumadba looga wada shaqaynayo danta qaranka iyo horumarintiisa waxaanan aad uga waaninay in ay ka fogaadaan waxyaabaha inta badan lagu xanto qurbe jooga ee ah hadalada iyo qoraalada aan wanaagsanayn ee lasoo dhigo baraha bulshada.”
Waxaa kale oo uu intaa raaciyay in kulan hore ay ula yeesheen shir guddoonka labada aqal baarlamaan ee Ingiriiska in ay ka codsadeen kulan ay la yeeshaan xildhibaanada labada aqal gaar ahaan gudiyada arrimaha dibedda taasoo laga aqbalay isla markaana loo muddeeyay in ay kulan wada yeeshaan 5 ta bishan,kulankaas oo uu tilmaamay wasiirku in ay ku soo bandhigayaan qadiyadda Somaliland. “waxaanu ka codsanay markii aanu kulanka koobaad la yeelanay shir guddoonka labada baarlamaan ee Ingiriiska in ay noo qabtaan kulan dambe oo aanu kaga qayb galno fadhiga labada guddi arrimo dibadeed ee baarlamaanka Ingiriiska si aanu qadiyadda Somaliland qoraal iyo hadal labadaba ugu soo bandhigno taana waa nalaga aqbay oo waxaanu ballan sannahay 5-ta bishan.”ayuu yidhi wasiirka wasaaradda xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka oo isagooku sugan London u waramay wargayska Dawan.